အီလက်ထရောနစ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဆိုတာ ဘာလဲ?
သင်ကရော အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်း တွေကို မကြာခဏဝယ်ယူသုံးစွဲနေတဲ့သူလား?
အီလက်ထရောနစ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဆိုတာ ဘက်ထရီ (သို့) plug (ပလပ်) ပါပြီး စွန့်ပစ်ထားတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ အီလက်ထရောနစ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း အမျိုးအစားတွေကတော့ စက်ကိရိယာ အကြီး၊ အသေးများနဲ့အတူ အပူ/အအေးခံနိုင်အောင် ဖန်တီးပုံဖော်ထားတဲ့ ကိရိယာတွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။
စနစ်တကျစွန့်ပစ်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင် အီလက်ထရောနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေက ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြီးကြီးမားမား ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းတွေကို ပြန်ပြင်ပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုတဲ့အလေ့အကျင့် (E-Waste refurbished) တွေနဲ့ စနစ်တ
ကျ စွန့်ပစ်တဲ့ အလေ့အကျင့်တွေက ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းတွေကို စနစ်တကျသုံးခြင်းအားဖြင့် ၎င်းမှာပါဝင်တဲ့ အခြားသောပါဝင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ ပလတ်စတစ်၊ သတ္တုနဲ့ ဖန် စတာတွေကိုလည်း တစ်ပါတည်းကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်နေပါတယ်။
- ကိုယ်အသုံးပြုနေတဲ့ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်း တွေကကော တာရှည်ခံရဲ့လား? - ကိုယ်ကလည်း အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေကို ရူးရူးမူးမူး ဝယ်စုတတ်တဲ့သူလား? - ပျက်စီးသွားရင်လည်း ပြန်ပြင်ပြီး ပြန်အသုံးပြုတာတွေကိုကော လုပ်ဖြစ်လား?
အဲ့ဒီတော့ RecyGlo ရဲ့ အပတ်စဉ်မျှဝေသွားမယ့် E-Waste (အီလက်ထရောနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်း) အကြောင်းကို Facebook/ Website တွေကနေ အတူတူ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်နော်။
What is E-Waste? Are you addicted to using and buying electronic devices?
So, do your electronic devices insure with the expired time? Are you addicted to using and buying electronic devices? Have you ever repaired your electronic devices for reusing?
What are we gonna do for our living environment?
Let’s havealook and read RecyGlo's weekly articles or contents about E-Waste from Facebook, and Website.
#Grow_with_RecyGlo #road_to_green_environment #Lets_Do_Not_Waste_Electronic_Devices_and_Save_the_Money